Ahoana ny fomba fampandehanana induction
Ny famafana induction dia dingana fanomanana mafana. Ny mpanamboatra induction dia mandefa arus mifandimby amin'ny alàlan'ny coil induction, izay miteraka saha elektromagnetika. Ity saha ity dia mitaona ny onja izay niova ho hafanana mifandraika amin'ny fitaovam-pitaovana toy ny vy. Ny hafanana dia miteraka ao ambanin'ilay firakotra, ka mahatonga ny fonosana hikopaka haingana. Ity fomba ity dia mety amin'ny fitsaboana ny faritra fisaka na miolaka eo amin'ny toeram-piasana ary tsy mila fitanana.
Ny rafi-pamoahana induction dia hanaisotra ny loko, ny firakotra hafa, ny harafesina lehibe, ny harafesin'ny bakteria ary ny diloilo ary ny menaka manosotra amin'ny alàlan'ny herinaratra (vy ferromagnetika) manapaka ny fifamatorana eo anelanelan'ny fitaovana sy ny residu etch substrate, ny induction fanafanana voarindra ary voafehy izay mandany angovo faran'izay kely.
Induction Coating Machine & Rafitra fanosorana loko hosodoko & RPR Induction System
Sokajy Technologies Tags fanesorana fanosorana induction fanafanana, famonoana lamba firakotra, fanamorana fanafanana induction, fanesorana loko hosodoko, fanalana loko hosodoko, rafitra PRP fampidirana, rafitra RPR fampidirana, fanesorana ny harafesina induction, fanosorana ny harafesina, fanalana induction, rafitra fanonganana induction, RPR Post Fikarohana